Dalagaan Gingilcha ufmaa sarjaawwan deetaa tokko yookiin ol irratti sanduuqa makaa kan tarreewwan mul'atan filachuuf si dandeessisu saaga.
Sarjaawwan gingilcha ufmaa irratti fayyadamtu filadhu.
Deetaa - Gingilchi - ufmaan gingilchifiladhu. Xiyyootni sanduuqa makaa hammanga tarree jalqabaa filatame keessatti ni mul'atu.
Xiyya gadbuusaa irraantoo sarjaa keessaa cuqaasuudhaanii fi waanta filachuudhaan gingilchaa kaachisi.
Tarreewwan qabiyyeen isaanii ulaagaa gingilchaa guutu qofatu mul'ata.Tarreewwan biroo ni gingilchamu.Akka tarreewwan gingilchamanii turan lakkoofsota tarree addaan citoo irraa arguu dandeessa.Sarjaan gingilchaaf fayyadee ture qabduu xiyyaatiif halluu addaatiin addaan baafatama.
Yeroo gingilcha ufmaa dabalataa sarjaa hammanga deetaa gingilchame kan biraa irratti raawwattu,achumaan sanduuqni makaa deetaa gingilchame qofa tarreessa.
Kuusaa hundaa ammas agarsiisuuf,galfata "mara" sanduuqa makaa gingilcha ufmaa keessaa filadhu. Yoo "Durtii" filatte, qaaqni Gingilcha Durtii gingilcha durtii akka qindeessitu si dandeessisuuf ni mul'ata. Gatiiwwan gurguddoo 10 qofa mul'isuuf "Guguddoo 10" filadhu.
Fayyadama gingilcha ufmaa dhaabuuf,man'eelee ejjatoo 1 keessatti filataman hunda lamuu filadhuutii Deetaa - Gingilchi - Ufmaan gingilchi fili.
Gingilcha ufmaa garaagaraa wardii garaagaraatti ramaduuf,dursitee tokkoon tokkoo wardii irratti hammanga kuusaa deetaa qindeessuu qabda.
Dalagaaleen herregaas man'eelee sababa gingilchaa raawwateen hin mul'anne xiyyeeffannaa keessa galchu.Fakkeenyaaf,ida'amni sarjaa hundaa gatii mara man'eelee filatamanii ta'a.Dalagaa CITA IDA'AMAA yoo man'eeleen erga gingilchi raawwatee mul'atan qofti xiyyeeffannaa argachuuf ta'an raawwadhu.
Deetaa - Gingilchi - Ufmaan gingilchi
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=Calc/Applying_AutoFilter/om&oldid=1578268"
This page was last edited 10:38:23, 2016-06-20 by LibreOffice Help user WikiSysop.